बिधान सम्बद प्रतिस्पर्धामा आउनेलाई परिषदमा स्वागत छ : महासचिव पन्त — Motivate News
Posted on September 27, 2016 by motivate news
काठमाडौँ – ठमेल पर्याटन विकास परिषतमा केहि समय अगाडी देखी विवाद देखीएको छ । निर्वाचित अध्यक्ष रामशरण थपलियाले दुई बर्षसम्म साधारणसभा बोलाउन नसकेको, बोलाईएको साधारणसभा पनि स्थगीत गरेर समस्याबाट भाग्न खोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट पक्षले अर्को अध्यक्ष घोषणा गरेरै अगाडी बढे । नयाँ अध्यक्ष पक्षले आफूसंग बहुमत रहेको दावि गरिहेको छ, भने थपलियाले सबै पदाधीकारी बोलाएर आफ्नो पक्षमा मत रहेको देखान पत्रकार सम्मेलन नै गर्न पर्यो । ठमेलको खास समस्या के हो ? जनताको समर्थन कता छ र यो समस्याको समाधान के हो ? आगामी दिनमा ठमेल पर्याटन परिषद कसरी अगाडी बढ्छ भनेर ठमेल पर्यटन विकास परिषदका महाँसचिव गोविन्द प्रसाद पन्तसंग केहि कुराकानी गरेको छौँ । प्रस्तुत छ सोहि कुराकानीको संम्पादित अशं ।
तपाईको संस्थामा केहि समयदेखी विवाद देखीएको छ, खास समस्याको चुरो के हो ?
खास यो समस्या हुँदै होइन्, समस्या एउटा शैलि र प्रविद्धीको हो । अध्ययन गरेर वास्तविकता के हो भनेर नबुझेकाले यो समस्या जस्तो देखीएका हुन । हाम्रो कमिटी भित्रका केहि साथीले नबुझेरै विवाद उत्पन्न गरे, त्यो हाम्रो संस्थाको विद्यान विपरित थियो । यस्तो गर्न नहुने काम उहाँहरुले गर्नुभयो ।
तपाईले विधान विपरित भन्नुभयो, विधान विपरित कसरी भयो ?
साधारणसभाको विषयमा हाम्रो विधानले स्पस्ट रुपमा बोलेको छ । हाम्रो संस्थाको विधि छ, त्यहि विधि र विधान अनुसार ठमेल पर्यटन विकास परिषद चलेको छ । विधान अनुसार हरेक बर्ष साधारणसभा गर्नपर्ने हुन्छ । अघिल्लो बर्ष भुकम्प र नाकाबन्दीले गर्न सकिएन । यो बर्ष साधारणसभा गरैँ भनेर साथीहरुसंग सल्लाह भयो । केहि साथीहरुले नगर्ने भनेर विरोध गर्नुभयो । जव हामीले साधाराण सभा बहुमतले स्थगन गर्यौ, तव उहाँहरु हामी विरुद्ध सडयन्त्र रच्न थाल्नु भयो । त्यहि कुरोलाई केहि साथीहरुले मिडिया वाजि गर्नुभयो, जुन विधानको कुनै पनि धारले छुदैन् ।
उहाँले अभद्र शैलिमा म यस्तो भएँ, उस्तो भए भनेर आफै घोषणा गरेको मात्र हो । यो विषयमा अहिले हामी धेरै नबोलौँ । काम अगाडी बढिसकेको छ । प्रशासनको निर्णय कुर्दै छौँ । हाम्रो विधानमा कुनैपनि सभा, साधारणसभा, विशेष साधारणसभा अध्यक्ष वा महाँसचिव बाहेक अरुले बोलाउन पाईदैन्, त्यो विधान विपरित हुन्छ ।
जसरी विधानमा जुन लक्ष्य उद्येश्य राखेर काम गरिरहनु भएको छ, यसरी नेतृत्वको लागि झगडा गरिरहदा यहाँका व्यावसायीहरु जो भोटर हुनुहुन्छ, उहाँहरुमाझ राम्रो सन्देश त गइरहेको छैन् नि है ?
यो हाम्रो झगडा पटक्कै होइन । जव नेपालमा भुकम्प गयो, त्यसपछिको नोपालको पर्यटनमा धक्का लाग्यो । त्यसपछि संविधान बन्यो र भारतको आघोषित नाकाबन्दीले झन थिलो थिलो बनायो पर्याटन क्षेत्रलाई । यसरी भईरहेका समस्याको समाधान गर्नतिर हामी लाग्योँ, कसरी ठमेलको शान्ति सुरक्षामा प्रशासनसंग समनन्वय गर्ने, विकास निमार्णलाई कसरी गति दिन सकिन्छ भनेर सबन्धीत निकायसंग छलफल गर्ने यस्ता खालका कार्यहरुमा हामी लागीपर्योँ । अहिले आएर यी विषयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ठाँउमा साथीहरु गलत बाटो लाग्नुभयो । उहाँहरु धोकाको बाटो हिड्नु भयो । यदि साथीहरुले आउट अफ ट्रयाट गएको स्विकार्नु भयो भने उहाँहरुलाई फेरिपनी स्वागत छ ।
अन्तिममा त मिलेर जानुको विकल्प नरहला, तपाईहरु आफ्नो ढङगको कुरा गरिरहने, उहाँहरु त्यो नमानिरहदा अँझ समस्या त लम्बिने स्थिति देखीन्छ होइन् ?
मिल्नुको विकल्प छैन्, यो हामीले पनि भनिरहकै कुरा हो । कुरा के त भन्दा एउटा न्यायीक तरिकाबाट आउनुपर्यो । गैर न्यायीक, अभद्र तरिकाबाट प्रतिशप्रदा गर्नु राम्रो होइन् । विधान अनुसार अवको सात महिनासम्म हाम्रो टिमको म्याद छ । त्यसपछि चुनावबाट जो कोहि पनि आउन सक्छ । त्यसमा हामी कसैको आपत्ति छैन् । उहाँहरु आएपनि स्वागत छ ।
Posted in अन्तर्वार्ता, अर्थ/रोजगार | Tagged ठमेल, पर्यटन | Leaveareply